INGELOSI INOMBOLO 444 INTSINGISELO YOKOMOYA + UPHAWU - INANI
Ingelosi Inombolo 444 Intsingiselo yokomoya + Uphawu
INTSINGISELO YOKUNGCONO 444
Njengoko ilizwi beliya kuhamba, ngaba uziva ngathi unjalo ukunyuka umlambo ngeyure engabheqi? Ungakhe ulinge ucinge ngokuncama ngoku! Ingelosi inombolo 444 iza kuwe njengophawu lokuba imithandazo yakho iviwe kwaye uMhlaba uyakukhuthaza ukuba uhlale ujonge ukugqiba umsebenzi. Usondele kakhulu ekufezekiseni amaphupha akho! Khawukhumbule nje ukuba wonke umsebenzi wakho onzima sele uza kuhlawula, kwaye i-Universe iyayiqonda inkuthalo kunye nokuzimisela kwakho njengokuncomekayo- bathumela yonke inkxaso oyifunayo ukuze uphumelele! Ukuba enye yeenjongo zakho kukufumana uzinzo, ingelosi 444 iyayixhasa ngokupheleleyo loo nto ukukunceda kuqala ngokwakha isiseko esiqinileyo. Iinjongo zakho ekugqibeleni ziyafikeleleka njengoko uqhubeka nokwakha esi siseko siqinileyo sempumelelo ehleliyo, engapheliyo.
Ukubona ingelosi i-444 luphawu lokuba ucele uncedo kwi-Universe kwaye uzinikezele ekufumaneni uncedo-ungawuthathela ingqalelo umsebenzi woMthombo kunye neengelosi ngamaxesha amdaka. Xa la maxesha esenzeka, bulela, kwaye uzive unombulelo ngoncedo olufumanayo. Ingelosi inombolo 444 imele ukuba sele unonxibelelwano olomeleleyo neengelosi kunye noMthombo kwaye usendleleni yokuvuka ngokomoya. Ke ngoko usenokuba sele uyazi ukuba kuba sihlala kwindawo apho sinenkululeko yokuzikhethela, kufuneka sicele uncedo kuMthombo, iNdalo, kunye neengelosi ukuze bathumele isikhokelo kunye neentsikelelo. Umhlaba uxhasa iinzame zakho zokufunda ngakumbi malunga nezinto zokomoya njengoko ukhokelwa kwaye ubona i-444 kuthetha ukuba unonxibelelwano olomeleleyo kummandla weengelosi kunye namandla aphezulu ombane.
Amandla engelosi inombolo 444 azisa imvakalelo yoxolo kunye nokulingana. Relax ngokwazi ukuba akukho nto yokoyika okanye ukukhathazeka kuba awukho kwindlela elungileyo kuphela, kodwa ukhuselwe kwaye uxhaswe nguMhlaba.
Intsingiselo yenombolo 1111
izihlangu zabasetyhini ezilungileyo zokuma yonke imini
ishampu yokulahla inkwethu
Yintoni elungileyo ye-aventurine